အောင်ထွန်းဦး: လူသားများအတွက် ပေးဆပ်နေရသော သနားစရာ တိရစ္ဆာန်လေးများ
အသုံးဝင်သော ဖုန်း applications များ
Andriod ဖုန်း Games များ
လူသားများအတွက် ပေးဆပ်နေရသော သနားစရာ တိရစ္ဆာန်လေးများ
တစ်ချို့လူမျိုးတွေဟာ ခွေးတွေ၊ ကြောင်တွေကို စားသောက်ကြတာကို ခွင့်ပြုထားကြပါတယ်၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်အပါအ၀င် အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ခွင့်ပြုထားကြတာပါ..။
တစ်ချို့လူတွေက တိရစ္ဆာန်တွေကို ရက်စက်စွာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးမှ စားသောက်ကြပါတယ်..၊ သူတို့အယူအဆကတော့ တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်ဟာ မသေခင် အရမ်းကို ကြောက်ရွှံ့မယ်..၊ အရမ်းကို နာကျင်နေမယ်.. ဆိုရင် အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ဟာ သွေးခုန်နှုန်းမြန်လာပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းလာကာ အဲ့ဒီအသားဟာ ဘာနဲ့မှမတူတဲ့အရသာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး လူသားတွေအတွက် စွမ်းအားတွေကိုတောင် ပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်..၊ ဒါတွေဟာ သိပ္ပံပညာရပ်အရ လုံးဝ လက်ခံလို့ မရပေမယ့် အခုချိန်ထိ ရှေးကျတဲ့ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေဟာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်..။
တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင် စားသုံးသူတွေက ခွေးတွေကြောင်တွေ လှောင်ထားတဲ့ လှောင်အိမ်တွေဆီကိုသွားပြီး သူတို့စားသုံး လိုတဲ့ တိရစ္ဆာန်ကို ရွေးကြရပါတယ်..၊ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အဲ့ဒီအရွေးခံရတဲ့ တိရစ္ဆာန်ဟာ အရမ်းကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် တဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ တုတ်နဲ့ရိုက်ခြင်း၊ ရေနွေးပြုတ်ခြင်း၊ အရှင်လတ်လတ် အရေခွံခွာခြင်း စတာတွေကို ပြုလုပ်ခံရပါတော့တယ်..။ အဲ့ဒီဆိုင်မှာ ရှိတဲ့ခွေးလေးတွေ၊ ကြောင်လေးတွေဟာ လူခြေသံကြားရင် ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်ပြီး ကြောက်လန့်နေတတ်ပြီး အဲ့ဒီခြေသံတွေဟာ သူတို့အတွက် သေမင်းတမန်ခြေသံဆိုတာ သူတို့ သိထားကြနေပါပြီ..။
အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ သနားစရာ တိရစ္ဆာန်လေးတစ်ကောင်..၊ သူ့ဘ၀စတာတောင် သိပ်ကြာပုံမရသေးပါဘူး..၊ ဒါပေမယ့် ကံဆိုးစွာပဲ သူ့ရဲ့သခင်က လူကောင်း ဖြစ်မနေခဲ့ဘူး.၊ သူဟာ အချိန်မရွေး ပူပြင်းလှတဲ့မီးတောက်ပေါ်မှာ အရှင်လတ် လတ် အကင်ခံရနိုင်တယ်လေ…။
တိရစ္ဆာန် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလည်း ဒီဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ မဖြစ်ပွားဖို့အတွက် နေ့တိုင်း ကြိုးစားနေကြပါတယ်..၊ သီချင်းတွေရေးတယ်..၊ စာတွေ ဆောင်းပါးတွေရေးတယ်..၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တယ်..အများကြီးပါပဲ..၊ ဒီလိုလူကောင်း တွေကြောင့်လည်း ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေဟာ လျော့ပါးလို့တော့ လာခဲ့ပါပြီ..။ ဒါပေမယ့် တိရစ္ဆာန်တွေအတွက် သူတို့ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ ကာကွယ်မှုတွေကတော့ အများကြီး လိုအပ်နေပါသေးတယ်..။
ဒီအကြောင်းတွေကို ဖတ်ရတာ ခက်ခဲမယ် စိတ်ညစ်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်..၊ ဒါပေမယ့် ဒီဖြစ်ရပ်တွေ ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတယ်ဆိုတာကို သိမှာသာ ပြောင်းလဲမှုဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာမှာပါ..။ စာဖတ်သူဟာ ကျွန်တော့်လို တိရစ္ဆာန်ချစ်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို ဘာကြောင့်ရေးရသလဲဆိုတာကို သဘောပေါက်မှာပါဗျာ…။
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 5:10 PM
ခေါင်းစဉ် လူသားများ၏ ရက်စက်မှုများ
Anonymous June 28, 2013 at 5:57 AM
သူတို့မှာစာနာစိတ်မရှိကြဘူးနဲ့တူတယ်နော် ကိုအကောင်းစားနိုင်ဖို့အရေးကိုသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုရက်ရက်စက်စက်သတ်ကြတယ် တနေ့ကျရင်ဝဋ်ကောင်းကောင်းလည်မယ့်လူတွေပဲ
Anonymous July 22, 2013 at 8:31 PM
သူတို့မှာ အဲဒီလို အသိစိတ်တောင် ရှိမျာမဟုတ်ဘူး တော်တော်သနားစရာကောင်းတဲ့လူတွေပဲ
စာရေးသူရဲ့ Facebook Profile ပါ
Aung Htun Oo
Facebook Page လေးလည်း ထောင်ထားပါတယ်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ကျွန်တော် အောင်ထွန်းဦးမှ ကြိုဆိုပါတယ်..
ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေရွေးပြီး Blogspot လေးတစ်ခု တည်ဆောက်ထား တာဖြစ်ပါတယ်..
ဝေဖန် အကြံပြုလိုပါက tunoo.aung81@gmail ကို မေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း..၊ Gtalk မှ လည်းကောင်း ဝေဖန် အကြံပြုပြောကြားနိုင်ပါတယ်..။
အဆင်မပြေမှုများ ရှိခဲ့ရင်လည်း ဒီနေရာနေပဲ တောင်းပန်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျား...
Site ကို ထောင်ခဲ့တာ
Andriod ဖုန်း Games များ (9)
ကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့် softwares များ (17)
ရင်သို့ထိမိသော စာစုများ (61)
လူသားများ၏ ရက်စက်မှုများ (56)
သတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်များ (25)
သရဲနှင့် နာနာဘာဝ (33)
အသုံးဝင်သော ဖုန်း applications များ (24)
Blog အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိချင်ရင်
Facebook Users များ like လုပ်ခြင်းဖြင့် မိမိ wall တွင် updates သတင်းများ ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်
သတင်းများကို Email မှ ဖတ်ချင်လျှင် အောက်မှာ Email ရိုက်ထည့်ပေးခဲ့ပါ Submit ကိုနှိပ်ပါ
Join this site ကိုနှိပ်ပြီး ဒီမှာ Member ၀င်ခဲ့နိုင်ပါတယ်
Andriod ဖုန်းများအား Applications များထည့်သွင်းခြင်း
Andriod ဖုန်းတွေမှာ application တွေ ဂိမ်းတွေကို ဆိုင်တွေမှာ ပိုက်ဆံပေးပြီး ထည့်နေကြရပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ application တွေ၊ ဂိမ်းတွေ သွင်းတယ် ...
ပထမဦးဆုံး Myanmar Mobile App Market for Andirod
Myanmar Mobile App Market for Android Share Application Name- Myanmar Mobile App Market Owner- Myanmar Mobile Application Stor...
အင်တာနက်မှ ဟာသ ဓါတ်ပုံများ
အင်တာနက်မှ တွေ့ရှိရသော ဟာသ ဓါတ်ပုံများကို အပျင်းပြေ ကြည့်ရှု့နိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ရပါတယ်..။
Andriod ဖုန်းများအတွက် မရှိမဖြစ် Gothere Myanmar Software
ဖုန်းတစ်လုံး၏ အဓိက တည်နေရာကို အခြားဖုန်းတစ်လုံး သို့မဟုတ် ဖုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကွန်ပျူတာမှ တစ်ဆင့် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါက တည...
ကျုပ်နဲ့ ရန်ကုန်အထာ - ၂
ဒီလိုနဲ့ ကျုပ်ကျောင်းတက်လာတာ တစ်လလောက်လည်း ရှိရော.. အခန်းထဲက သူတွေနဲ့ ကျုပ်နဲ့ အကုန်ရင်းနှီးလာတယ်..။ ရန်ကုန်ကလူတွေက လွှတ်ခင်ဖို့ကောင်...
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာမှ ကိုယ်ကိုယ့်ကို မီးရှို့ဆန္ဒပြမှု ဖြစ်ပွား
အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် ပြည်သူလူထုများက အစိုးရကို မကျေနပ်လို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြရာမှ လူတစ်ဦး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မီးရှို့ဆန္ဒြပမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
နောက်ဆုံးရ မြန်မာ သတင်းများ- ၁
နောက်ဆုံးရ မြန်မာသတင်းများ - ၂
သတင်းများကို သင့် Andriod ဖုန်းမှ ဖတ်ချင်လျှင်
ဒီမှာ Click ပါ
ချီလီနိုင်ငံမှ အယူသီးဘာသာရေးဂိုဏ်းက ရက်သားကလေးငယ်အ...
နာမည်ကြီး Celebrities များနှင့် ပုံတူများ
HUAWEI U8950D ကို Root ပြုလုပ်ခြင်း
Laptop ကနေ wifi ပြန်လွှင့်ပေးမယ့် connectify
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ထူးခြားစွာ မွေးဖွားလာရတဲ့ ကလေးငယ်မျ...
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရောဂါ Facial Turmor
ကနေဒါမှာတွေ့တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ သတ္တ၀ါ
လူသားများအတွက် ပေးဆပ်နေရသော သနားစရာ တိရစ္ဆာန်လေးမျာ...
စာဖတ်သူများ ရင်နင့်စေမယ့် ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ
မြွေဟောက်ရဲ့ ခွေးလေးတွေအပေါ် ထားရှိတဲ့ အကြင်နာတရား
လူဝင်စား ထူးခြားဖြစ်စဉ် (၃နှစ်အရွယ်မှာ တရားဝင်လက်ထ...
Andriod Phones အချင်းချင်း SMS နဲ့ files တွေကို အခ...
Gmail အကောင့်တစ်ခုကို Phone verifcation မလိုပဲ အလွ...
Aung Htun Oo. Picture Window theme. Theme images by andynwt. Powered by Blogger.